30 Mar, 2018 - 00:03	 2018-03-29T17:07:21+00:00 2018-03-30T00:01:21+00:00 0 Views
VETISHAMWARIDZANE makaita basa, ndakazomuwana wandaida akatouya kumba saka vachiri kufona pa0777 514 195 chiregai.
Ndiri jaya rine makore 23 pakuberekwa, ndinodawo shamwarikadzi yekuvaka musha nayo. Ndinoita zvemubato wemaoko. Nhare yangu 0774 815 541.
Makadiiko veTishamwaridzane? Ndiri musikana ane makore 20, ndinotsvagawo mukomana wekudanana naye. Ndinoda anogeza uye ari HIV negative. Anonamata Mwari ngaandibate pa0779 229 076.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana 2, ndotsvagawo murume anoda zvemba, anogeza. Anoda anondibata pa0737 456 669.
Ndiri murume ane makore 54, ndinotsvagawo mudzimai wekuroora. Handisi pamushonga uye ndiri muHarare. Andida anondibata pa0784 440 666.
Ini ndiri mukomana ari pakutsvaga mudzimai anoda kuwanikwa, chero ane mwana wake. Anoda nezvangu anotumira sms pa0774 705 725. Ndiri kwaChivi.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 36 nevana 3, ndotsvagawo murume ane makore 39 – 45 anogara muHarare. Zvakawanda tozotaura, anoda ngaandibate pa0737 948 330.
Makadii? Ndiri murume ane makore 40, handina mwana uye ndiri kutsvagawo mukadzi kana musikana asina mwana ane makore 20 – 30. Ari HIV positive ngaandibate pa0782 413 192.
Makadii veTishamwaridzane? Ini ndiri mudzimai ane makore 43 nevana vatatu. Ndinotsvagawo murume ane makore 45 kusvika 55 asiri pamushonga. nhare yangu 0784 898 231.
Makadii? Ndiri murume ane makore 29, ndiri pamushonga uye ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ave kuda zvemba. Ngaave asingabereke kana ane mwana 1 anopinda chechi yekwaMwazha ari pamushongawo seni, kunyanya anobva Rushinga kana Mutoko. Ane makore 24 zvichidzika, andida ngaandibate pa0774 074 955.
Ndiri murume ane makore 48 ndinodawo mukadzi ane makore 30 kusvika 40 anoda kuroorwa totanga imba yedu. Vanoda tumirai sms kana kufona pa0784 196 645.
Makadii? Ndiri musikana ane makore 21, ndonotsvagawo mukomana anoda zvemba neni. Ngaave ane makore 24 kusvika 30. Andifarira anofona pa0783 085 083.
Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 31, ndinotsvagawo murume anoda kuroora anoshanda. Nhare yangu 0774 289 101.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 33, ndinotsvagawo shamwarirume ine makore 45 kusvika 48 okuberekwa ari pamushonga. Nhare yangu 0782 461 596.
Ndiri musikana ane makore 24 okuberekwa, ndakaremara ruoko negumbo zvese. Ndodawo munhu ari pachokwadi ane makore 28 kusvika 35 ari pachokwadi. Nhare yangu 0736 106 731.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 22, ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 25 kusvika 35 asinganwi doro kana kuputa fodya. Anoda Mwari uye anoshanda ngaandibate pa0778 052 524.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 43 nevana vatatu. Ndinotsvagawo murume ane makore 45 kusvika 55 asiri pamushonga ari smart. Nhare yangu 0784 898 231.
Makadini veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 43, ndine vana 3 uye ndogara kuBeatrice. Ndotsvagawo murume ane makore 44 kusvika pa60 anofarira kunamata. Nhare yangu 0776 291 245.
Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 31, ndinotsvagawo murume anoda kuroora anoshanda. Ini ndinoshanda, anoda ngaandibate pa0774 289 101.
Ndiri mukomana mupfupi ane makore 24, ndotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 23. Ngaave anoshanda, ini ndinoshanda. Anoda ngaandibate pa0779 682 330.
Makadii henyu veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 24, ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 – 22. Anoda zvemba anondibata pa0777 097 869.
Makadii? Ndiri kutsvagawo murume anoda zvemba, ndiri musikana ane makore 26. Varume vevanhu kana vanoda zvekutamba kwete. Vanoda ndibatei pa0783 571 293.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 32, handina mwana uye ndinotsvagawo murume ane makore 33 kusvika 40 ane mwana 1 kana asina. Ari pamushonga ngaandibate pa0734 918 964.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane mwana 1, HIV positive uye ndinotsvagawo murume ane vana 2 kana 1. Ndine makore 35 okuberekwa, nhare yangu 0737 973 875.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 32 ekuberekwa, ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 35 kusvika 50 anoda zvemusha. Ndinobatika pa0737 600 023.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 23 nemwana 1, ndinotsvagawo murume ane makore 27 kusvika 34. Ngaave ari pamushonga uye asati ave kuratidzika. Nhare yangu 0713 439 603.
Ini ndiri mukomana ane makore 20 ndinotsvakawo musikana ane makore 18. Munondibata pa0771 957 541.
Makadii? Ndine makore 35, ndotsvagawo musikana ave kuda zvemba anogara muHarare. Asina mwana ngaandibate pa0775 543 556.
Ndinotsvagawo musikana ari serious nekuvaka imba. Ndine makore 24, vanoda zvekufara handidi hangu. Nhare yangu 0715 467 295.
Ini ndiri murume ane makore 36 ndodawo mudzimai wekuroora ane makore 25 – 30 asi handizi pamushonga. Ndoshanda, handina kumbobvira ndaroora. Nhare yangu 0785 607 195.
Makadiiko veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 22 anotya Mwari. Anoda zvemba ari HIV negative ngaandibate pa0776 524 483.
Ndiri mukadzi ane makore 40, ndiri positive uye ndinotsvagawo murume anondida. Vanoda ndibatei pa0777 118 551.
Makadii veKwayedza, ndiri mukomana ane makore 22 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 20 kusvika 22. Vane vana musafone henyu, nhare yangu 0783 928 813.
Makadii vechirongwa chino? Ndiri mukomana ane makore 28 ndodawo musikana ane makore 18 – 26 ane mwana kana asina. Nhamba dzangu 0782 992 262.
Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 31 nevana 3, ndodawo shamwarirume iri pamushonga asi varume vevanhu kwete. Ndoda ari pachokwadi, nhare yangu 0777 584 259.
Ndiri murume ane makore 49, ndinotsvagawo mapenpals vekutaura navo nyaya. Nhare yangu 0773 942 684.
Ndiri kutsvagawo mukadzi anoda zvemusha ane makore 20 kusvika 30. Ini ndine makore 31, ndoda ari pamushonga seni. Nhamba dzangu 0737 977 983.
Ndiri mukomana ane makore 21 ndinodawo musikana ari kuda zvemba ane makore 18 kusvika 20. Andida tumira sms pa0784 514 227.
Makadii veKwayedza? Ndingafare kwazvo mukandishambadzirawo. Ndiri mukomana ane makore 26 uye ndiri pamushonga. Ndinotsvagawo musikana wekuvaka naye musha. Anoda anondibata pa0737 386 537.
Ndiri mukadzi ane makore 30 nevana 3, ndiri pamushonga asi handiratidziki kurwara. Andifarira ngaandibate pa0783 317 762.
Ndiri murume ane makore 34 ndodawo musikana anoda kuvaka musha. Ndinoda vari muHarare chete, nhamba dzangu 0713 988 782.
Ndiri mukomana ane makore makumi maviri nemashanu. Ndinotsvagawo musikana ane makore 23 zvichidzika asina chirwere. Nhamba dzangu i0783 901 036.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 41, ndiri pamushonga uye ndodawo murume ane makore 44 – 55 ave kuda zvemba. Nhare yangu 0738 797 469.
Makadii henyu? Ndinotenda nebasa ramunoita. Ndiri murume ane makore 50, ndinodawo mudzimai ane makore 35 kusvika 40. Ini ndine vana 2 uye ndinoda mudzimai anotya Mwari kwete ini. Ada ngaandibate pa0718 273 386 asi ngaave anochengeta sabata.
Makadii zvenyu? Ndiri mukadzi ane makore 30 nemwana 1, HIV positive uye ndotsvagawo murume ane makore 40. Anenge andida anondibata pa0775 084 489.